राजनीति – Page 416 – Halkaro
प्रमुख तीन दलले अहिले सम्मको काम खोलामा बगायो
काडमाडौँ, असोज १८ । स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगले तीन दल र सरकारको निर्णयका कारणा फेरी शुन्यबाट काम थाल्नुपर्ने स्थिति आएको भन्दै गुनासो गरेको छ । उसले यही अवस्थामा कात्तिक मसान्तभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने समेत जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन चैतमा गर्ने घोषणा गरे पनि निर्वाचन […]
आयोगको दबाब पछि ४२ एलडिअाेको सरूवा रोकियो
काठमाडौँ, असोज १८ । स्थानीय विकास मन्त्रालय स्थानीय तहको सीमान र संख्या निर्धारण आयोगले आपत्ती जनाए पछि स्थानीय विकास अधिकारीको सरूवा रोक्न बाध्य भएको छ । स्थानीय विकास अधिकारीहरुको सरुवा गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णय प्रति स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगले आपत्ति जनाएपछि मन्त्रालयले तत्काललार्इ उक्त निर्णय स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । […]
एकता दिवसमा उपराष्ट्रपति
काठमाडौँ, असोज १७ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन जर्मनी एकता दिवसका अवसरमा सोमबार साँझ आयोजित विशेष समारोहमा सहभागि भएका छन् । नेपालका लागि सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत माथियास मेयरले आयोजना गर्नुभएको उक्त समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, उद्योगपति, व्यापारी, नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारी […]
मधेस प्रदेश नदिए छुट्टै देश माग्ने मधेसी नेताको चेतावनी
प्रकाशित मिति : २०७२, २५ असार शुक्रबार October 3, 2016
काठमाडौँ । एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सोमबार सिंहदरबारमा संविधानको मस्यौदा बारे मधेसी नेताहरुसँग अन्तक्रिया गरेका छन् । छलफलका क्रममा मधेसी नेताहरुले मधेसलाई उपेक्षा गरेर मस्यौदा आएको आरोप लगाएका छन् । कार्यक्रमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभासद अमरेशकुमार सिंहले मधेसलाई बन्दुकको नालमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । मधेसी जनताले प्रदेश नदिए देश मागिरहेको उनको भनाइ […]
जनताको सुझाब सेन्सर गर्ने अधिकार शीर्ष पाँच नेतालाई ?
प्रकाशित मिति : २०७२, २४ असार बिहीबार October 3, 2016
फाइल पोटो काठमाडौं । जनताको सुझाबलाई सेन्सर गर्ने जिम्मा ठूला दलका पाँच ठूला नेतालाई दिइएको छ । संविधानको पहिलो मस्यौदा माथि जनताले गत ४ र ५ गते दिएको सुझाबलाई अध्ययन गरेर मस्यौदामा थपघट गर्ने जिम्मा चार दलका शीर्ष नेता तथा संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई दिइएको हो । साथै यो […]
समचार टिप्पणी : बजेट राजनीति
प्रकाशित मिति : २०७२, १८ असार शुक्रबार October 3, 2016
काठमाडौँ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले असार ३० गते आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को लागि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संसदमा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट आएसँगै यसको औचित्य र कार्यान्वयनको सम्भावनामाथि विभिन्न राजनीतिक […]